ယူနိုကျတကျနဲ့တှဆေုံ့မယျ့အပျေါ ဆိုးလျရှားကို သတိပေးစကားတှပွေောလာတဲ့ ပကျဂှာဒီယိုလာ
January 6, 2020 Writer News 0
ဒီတဈပတျမှာတော့ လိဂျဖလားဆီမီးဖိုငျနယျအဖွဈ ယူနိုကျတကျအသငျးနဲ့ မနျစီးတီးအသငျး တို့ယှဉျပွိုငျကစားကွတော့မှာဖွဈပါတယျ။ အိမျကှငျး၊အဝေးကှငျး နှဈကြော့ ယှဉျပွိုငျရမှာဖွဈပွီး ပထမအကြော့ကို ယူနိကျတကျ အိမျကှငျး အိုးထရဒျ့ဖိုဒျ့မှာ ယှဉျပွိုငျကစားရမှာဖွဈပါတယျ။ ဒုတိယအကြော့ကိုတော့ ဇနျနဝါရီလ၂၉ရကျနမှေ့ာ မနျစီးတီး အသငျးရဲ့ အီတီဟဒျကှငျးမှာ ယှဉျပွိုငျကစား ရပါမယျ။
အဲဒီပှဲစဉျတှေ မကစားခငျ မနျစီးတီးနညျးပွ ဂှာဒီယိုလာက ယူနိုကျတကျအသငျးနဲ့နညျးပွဆိုးလျရှားကို သတိပေးစကားတှပွေောဆိုလာခဲ့ပါတယျ။ “ယူနိုကျတကျအိမျကှငျးမှာ ကစားတဲ့အခါ အဝေးကှငျးဖွဈ တာကွောငျ့ ခကျခဲတာတှရှေိပါလိမျ့မယျ။ ယူနိုကျတကျက တညျဆောကျရငျးနဲ့ ရှဆေ့ကျနတေဲ့ အသငျးဖွဈပါတယျ။ ယူနိုကျတကျမှာလူငယျခွတေကျကစားသမားတှရှေိပါတယျ။ ဂြိမျး၊မဆေငျ၊မာရှယျ၊ လငျဂတျစတဲ့ထူးခြှနျတဲ့ကစားသမားတှရှေိပါတယျ။ ဝုဗျလျနဲ့ပှဲကလူစာရငျးမှာဆိုရငျ လူငယျတှေ ကိုအားပွုသုံးထားပါတယျ။ကြှနျတျောတို့နဲ့ကစားတဲ့ပှဲမှာတော့ လူစာရငျးအပွောငျးအလဲ လုပျပါလိမျ့မယျ”လို့ မနျစီးတီးနညျးပွကပွောပါတယျ။
“ကြှနျတျောတို့နဲ့ကစားရမယျ့အပျေါ ယူနိုကျတကျအနနေဲ့အာရုံစိုကျကစားမယျလို့ကြှနျတျောထငျပါတယျ။ ဒီပှဲက တဈကြော့တညျးနဲ့ပွီးမှာမဟုတျဘဲ နှဈကြော့ကစားရမှာဆိုတော့ ရလဒျကောငျးဖို့က သခြောဂရုစိုကျရပါမယျ။ နှဈသငျးစလုံးအဲလိုစိတျရှိပါတယျ။ ကြှနျတျောကတော့ အသငျးအတှကျ၊ကစားသမားတှအေတှကျ၊ အားပေးတဲ့ပရိသတျတှအေတှကျ သုံးနှဈဆကျတိုကျ ဗိုလျလုပှဲကိုရောကျတယျဆိုတဲ့ ပြျောစရာစိတျခံစားခကျြကိုပေးခငျြပါတယျ”လို့ နညျးပွကွီး ဂှာဒီယိုလာကပွောပါတယျ။
မနျစီးတီး နညျးပွအတှကျ ပရီးမီးယားလိဂျဖလားက အရေးကွီးသလို၊ ယူနိုကျတကျနညျးပွ ဆိုးလျရှားအတှကျလညျး လိဂျဖလားဟာပဈမှတျထားထားတဲ့ အရာတဈခုဖွဈတာကွောငျ့ မနျစီးတီးကိုကြျောလှားနိုငျဖို့ကွိုးစားမှာဖွဈပါတယျ။ မွို့ခံပွိုငျဘကျနှဈသငျးတှဆေုံ့မှုမှာ ဘယျသူကပှဲပွီးရလဒျအပျေါ စကားကွှယျနိုငျမလဲဆိုတာစောငျ့ကွညျ့ရပါမယျ။ ပရိသတျတှကေရောဘယျအသငျးကိုနိုငျစခေငျြပါသလဲ?
ယူနိုက်တက်နဲ့တွေ့ဆုံမယ့်အပေါ် ဆိုးလ်ရှားကို သတိပေးစကားတွေပြောလာတဲ့ ပက်ဂွာဒီယိုလာ
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ လိဂ်ဖလားဆီမီးဖိုင်နယ်အဖြစ် ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ မန်စီးတီးအသင်း တို့ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ကွင်း၊အဝေးကွင်း နှစ်ကျော့ ယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပြီး ပထမအကျော့ကို ယူနိက်တက် အိမ်ကွင်း အိုးထရဒ့်ဖိုဒ့်မှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအကျော့ကိုတော့ ဇန်နဝါရီလ၂၉ရက်နေ့မှာ မန်စီးတီး အသင်းရဲ့ အီတီဟဒ်ကွင်းမှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစား ရပါမယ်။
အဲဒီပွဲစဉ်တွေ မကစားခင် မန်စီးတီးနည်းပြ ဂွာဒီယိုလာက ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့နည်းပြဆိုးလ်ရှားကို သတိပေးစကားတွေပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်။ “ယူနိုက်တက်အိမ်ကွင်းမှာ ကစားတဲ့အခါ အဝေးကွင်းဖြစ် တာကြောင့် ခက်ခဲတာတွေရှိပါလိမ့်မယ်။ ယူနိုက်တက်က တည်ဆောက်ရင်းနဲ့ ရှေ့ဆက်နေတဲ့ အသင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်မှာလူငယ်ခြေတက်ကစားသမားတွေရှိပါတယ်။ ဂျိမ်း၊မေဆင်၊မာရှယ်၊ လင်ဂတ်စတဲ့ထူးချွန်တဲ့ကစားသမားတွေရှိပါတယ်။ ၀ုဗ်လ်နဲ့ပွဲကလူစာရင်းမှာဆိုရင် လူငယ်တွေ ကိုအားပြုသုံးထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နဲ့ကစားတဲ့ပွဲမှာတော့ လူစာရင်းအပြောင်းအလဲ လုပ်ပါလိမ့်မယ်”လို့ မန်စီးတီးနည်းပြကပြောပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့နဲ့ကစားရမယ့်အပေါ် ယူနိုက်တက်အနေနဲ့အာရုံစိုက်ကစားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ဒီပွဲက တစ်ကျော့တည်းနဲ့ပြီးမှာမဟုတ်ဘဲ နှစ်ကျော့ကစားရမှာဆိုတော့ ရလဒ်ကောင်းဖို့က သေချာဂရုစိုက်ရပါမယ်။ နှစ်သင်းစလုံးအဲလိုစိတ်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အသင်းအတွက်၊ကစားသမားတွေအတွက်၊ အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် သုံးနှစ်ဆက်တိုက် ဗိုလ်လုပွဲကိုရောက်တယ်ဆိုတဲ့ ပျော်စရာစိတ်ခံစားချက်ကိုပေးချင်ပါတယ်”လို့ နည်းပြကြီး ဂွာဒီယိုလာကပြောပါတယ်။
မန်စီးတီး နည်းပြအတွက် ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားက အရေးကြီးသလို၊ ယူနိုက်တက်နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားအတွက်လည်း လိဂ်ဖလားဟာပစ်မှတ်ထားထားတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် မန်စီးတီးကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြို့ခံပြိုင်ဘက်နှစ်သင်းတွေ့ဆုံမှုမှာ ဘယ်သူကပွဲပြီးရလဒ်အပေါ် စကားကြွယ်နိုင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရပါမယ်။ ပရိသတ်တွေကရောဘယ်အသင်းကိုနိုင်စေချင်ပါသလဲ?
ယူနိုကျတကျနဲ့ ဝုဗျလျပှဲစဉျက သတိပွုမိတဲ့အခကျြမြား
မကျဒီဆငျကို ပေါငျ ၄၅သနျး+လငျဂတျနဲ့ ကမျးလှမျးမယျဆိုတဲ့သတငျးက ယူနိုကျတကျပရိသတျတှကေို အူတကျမတတျရယျစရာဖွဈစခေဲ့